काठमाडौं, २६ पुस। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन, प्रदेश सरकार र संसदको जिम्मेवारीबारे गृहकार्य गर्न गठित एमाले-माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यदललाई संयुक्त रुपमा निर्देशन दिएका छन् । आज विहान उमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा बसेको एमाले-माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसहित कार्यदलका सदस्यहरुको पहिलो संयुक्त बैठकमा ओली र प्रचण्डले […]
चितवन, २१ पुस । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब मूलकुमा विकास र समृद्धिको यात्राबाट कोही भाग्न नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार चितवन उद्योग संघको नवौं अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रचण्डले भने पहिले विकास भएन भनेर राजालाई दोष दियौ. अब कसलाई दोष दिने त्यसैले अब हामीले देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सकेनौं भने त्यो […]
पार्टी एकताबारे मिडियामा गलत प्रचार गरिए- प्रचण्ड
चितवन, २० पुस । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले–माआवादी पार्टी एकताबारे मिडियामा आएका समाचार गलत रहेका भन्दै एकता बारेमा कोहीकसैलाई बोल्न जरुरी नभएको बताएका छन् । भरतपुर महाननगरपालिकाको नगर परिषदमा सहभागि हन गृह जिल्ला चितवन पुगेका पुर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रेस चौतारी र प्रेस सन्टेर चितवनले संयुक्त रुपमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी एकताका […]
देउवालाई बाम दलले भने-‘के गर्नुछ गर्नुस, चाँडो सरकार छाड्नुस ।’
काठमाडौं, २० पुस । बाम गठबन्धनका प्रमूख दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई जे गरेर भएपनि चाँडै सरकार निर्माणको बाटो खोल्न दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलिय बैठकमा एमाले र माओवादी नेताहरुले प्रदेश प्रमूख तोक्ने र मुकाम तोक्ने कुरा सरकारको भएकाले आफूहरुले केही नभन्ने बताएका थिए । राजनीतिक […]
काठमाडौं, १६ पुस । नेतृत्वको रणनीतिक असफलता र पुरानो कार्यशैलीबाट अब पार्टी नचल्ने भन्दै कांग्रेसका युवा नेताले पार्टीका पहिलो पुस्तालाई विश्राम लिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले ७० वर्ष कटेका नेतालाई पार्टीबाट विश्राम लिएर अभिभावकको भूमिकामा बस्न आग्रह गरेका हुन् । निर्वाचनमा पार्टीले लज्जास्पद पराजय भोगेपछि युवा नेताले पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण माग गर्दै आएका छन् […]
बाबुरामले ४५ मिनेट भेटमा ओलीसँग के भने बालकोटमा ?
काठमाडौं, १२ पुस । नयाँ शक्ति पार्टी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र एमाले अध्यक्ष के पी ओली बीच सोमबार बिहान ओली निवास बालकोटमा भेट भयो । ओलीको निमन्त्रणामा बालकोट पुगेका पुगेका डा. भ«राईले ओली निवास पुगेलगतै ओलीलाइ बधाई दिए । अनि ४५ मिनेट गफमा विताए । नयाँ शक्तिसँग आबद्ध एक बुद्धिजीवीका अनुसार भट्टराईले ओलीलाई स्थिर सरकार […]
माओवादी एमाले एकता कति सम्भव कति असम्भव ?
काठमाडौं, १२ पुस । नेपालका प्रमूख दुई कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकताको चर्चा उत्कर्षमा छ । निर्वाचन अघि नै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरी निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार बनाएर चुनावमा होमीएका उनीहरु चुनावपछि एकताको कुरा वढि काम कम देखिएको छ । पार्टीका नेताहरु भन्दा कार्यकर्ता र भातृ संगठनहरुबीच एकताको छलफल र वादविवाद […]
बैद्यले गरे माओलाई सम्झदै क्रान्तिको कुरा
काठमाडौँ, ११ पुस नेकपा ९क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको सैद्धान्तिक पथप्रदर्शनमा नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु आजको कार्यभार भएको बताएका छन् । कम्युनिष्ट नेता माओ त्सेतुङको १२५औँ जन्म दिवसका अवसरमा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता वैद्यले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनका लागि माओले देखाएको बाटामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको […]
लामो समयको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्यायको शुरुवात गरेको छ । २००७ साल देखि हालसम्मका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको थिएन । पटक पटक भएका आन्दोलन पश्चात बनेका सरकारले पनि जनभावनालाई पूर्ण रुपमा […]
Posted in अन्तरवार्ता / बिचार,एक्सक्लुसिभ समाचार,राजनीति Read More »
कार्यकर्तालाई बाँड्यो सरकारले १० करोड रकम, निर्णय अझै गोप्य
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आफ्ना ५ सय २८ कार्यकर्तालाई १० करोडभन्दा बढी रकम बाँड्ने निर्णय गरेको कुरा गोप्य नै राखेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मंसिर २५ गते बसेको मन्पिरिषद् बैठकले कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने ‘गोप्य’ निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको १५ दिन वितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले […]